TOOS: Doorashada Duqa Boosaaso oo maanta qabsoomaysa, Ammaanka oo la adkeeyey, Villa Garoowe & Musharaxiinta M/weyne-nimada PL oo si adag iskugu arkaya. – Puntlandtimes
TOOS: Doorashada Duqa Boosaaso oo maanta qabsoomaysa, Ammaanka oo la adkeeyey, Villa Garoowe & Musharaxiinta M/weyne-nimada PL oo si adag iskugu arkaya.
September 6, 2018 W LAASCAANO
BOOSAASO(P-TIMES)- Doorashada Duqa magaalada Boosaaso ayaa maanta ku qabsoomaysa magaaladaas, waxaana ku tartamaya labo musharax oo kala ah Cabdisalaan Bashiir Cabdisalaan & Maxamed Mire oo labaduba kasoo jeeda magaalada Boosaaso.
Labada musharax mid kasta wuxuu adeegsanayay saacadihii lasoo dhaafay wax kasta oo uu awoodo, Kumanaan Dollar ayaa loo adeegsaday kala gadida codadka sidda ay ogaatay Puntlandtimes.com, kana diyaarinayso warbixin.
Mid kasta oo kamid ah musharaxiinta wuxuu qabaa kalsooni u gaar ah, isagoo eegaya lacagta laga qaatay oo ay qaateen mudanayaasha baarlamaanka kala saaraya.
Ammaanka ayaa la adkeeyey, waxaana Hoolka Doorashada ee magaalada Boosaaso hadda kusugan suxufiyiinta, waxayna diyaarsanayaan halka tabinta doorashada.
Wasiiro katirsan Xukuumadda Puntland ayaa faragalin toos ah ku lahaa loolanka xalay oo dhan socday, qaarkood waxay la kala safteen Musharaxiinta duqa u tartamaya, waxaana xasuus mudan in Cabdisalaan Bashiir Cabdisalaan shalay uun ka baxay golaha Wasiiradda ee Puntland, uuna aha wasiir kuxigeenkii Maaliyada.
Shaki ma saarna in ay Dawladdu si mug iyo miisaan leh waqti ugu bixinayso soo bixida Wasiir kuxigeenkii hore ee Maaliyadda Puntland, gaar ahaana Madaxtooyada oo dadaalka qeyb badan ka gashay, balse Musharaxiinta Madaxweyne-nimada Puntland ayaan laftirkoodu dab yar shideyn oo loolanka Boosaaso qeyb ka noqday.